WARBIXIN: Kaddib Heshiisyadii Arthur & Pjanic, Midkee
Barcelona iyo Juventus ayaa ku dhawaaqay inay la kala wareegeen labada ciyaartoy ee khadka dhexe ee Athur Melo iyo Miralem Pjanic, kuwaas oo midkoodba tegi doono kooxda kale.
Arthur Melo ayaa shan sannadood oo heshiis ah u saxeexay Juventus oo uu ku biiri doono marka lasoo dhamaystiro xili ciyaareedka. Sidaas oo kale Miralem Pjanic ayaa afar sannadood oo heshiis ah u saxeexay Barcelona.
Labadan ciyaartoy waxay Juventus iyo Barcelona ku kala biiri doonaan marka uu soo dhamaado xili ciyaareedka ee horyaallada LaLiga, Serie A iyo Champions League lasoo dhamaystiro.
Kaddib heshiiska labada kooxoodba ku dhawaaqeen, su’aasha ugu weyn ee la isweydiinayo ayaa ah, labada kooxood midka faa’iido ka heshay heshiiskan.
Heshiiska ay Juventus kula wareegtay Arthur Melo waxa uu dhigayaa in ay kooxda Talyaanigu bixiso 72 milyan oo Euro oo lagu daray 10 milyan oo kale oo ku xidhan bandhiggiisa, taas oo wadarta guud ee lacagta ay Barcelona siinayso ka dhigaysa 82 milyan oo Euro.
Barcelona ayaa dhinaceeda, waxay iyaduna siin doontaa Juventus lacag dhan 60 milyan oo Euro oo lagu darayo 5 milyan oo kale oo bandhiggiisa ku xidhnaan doona, waxaanay wadarta lacagta ay u shubayso Juventus ay tahay 65 milyan oo Euro.
Marka la isku jaro lacagta labada ciyaartoy, Juventus ayaa laga doonayaa 17 milyan oo Euro oo ay is-dheer yihiin, laakiin dhamaantood maaha kuwo hadda ay bixinayaan. 12 milyan oo ka mid ah lacagtan ayay si naqad ah u bixinaysaa Juventus, waana farqiga u dhexeeya heshiiska asalka ah ee aanay ku jirin lacagaha bandhigga ku xidhan. qaybta kale oo ah 5 milyan, waxa Juventus ka bixin doontaa gadaal haddii shuruudaha waajibinaya uu Arthur Melo buuxiyo.
Kubbad-sameeyaha reer Brazil ee Arthur Melo waxa uu qalinka ku duugay heshiis shan sannadood ah oo uu Juventus ugu biirayo, laakiin waxa ka duwan Miralem Pjanic oo heshiiskiisu yahay afar sannadood.
Kooxda Talyaanigu halkan waxay ku qabtaa faa’iido hal sano oo dheeraad ah marka loo eego sannadaha uu Arthur ahaan doono ciyaartoygeeda, waxaanay fursad kale u heli doontaa inay qandaraas cusub lasii saxeexato haddii ay bandhiggiisa kusii qanacdo, laakiin Barcelona waxay kaliya fursad u haysataa in afar sannadood oo cusboonaysiinteeda uu shaki ku jiro ay haystaan Pjanic.
Miralem Pjanic waxay da’diisu tahay 30 jir, waxaana xili ciyaareedkan lagu eedaynayay inuu hoos u dhacay oo qaabkiisii sii lumayo, taas oo ay sababtay da’diisa oo tilmaamaysa in cimrigiisa intii fiicnayd uu soo qaatay.
Arthur Melo waxa uu shan sannadood u saxeexay Juventus
Tababare Maurizio Sarri ayaa dhowaan si badheedh ah warbaahinta uga eedeeyey, isaga oo tilmaamay in qaabkii joogtada ahaa uu lumiyey, ayna tahay inuu booskiisa u dagaallamo haddii uu doonayo inuu lasii joogo.
Sidaas oo ay tahay ayay Barcelona kasoo bixisay 65 milyan oo Euro, waxaanu ka qaalisan yahay ciyaartooyo badan oo da’yar oo ay ka heli lahayd suuqa oo sannado badan sii ciyaari kari lahaa.
Afarta sannadood ee heshiiska ah oo cimrigiisa ciyaareed kusoo beegmaya, way adag tahay inuu si heersare ah u ciyaaro, iyadoo ay suurtogal tahay inuu u baahdo waqti uu kula qabsado kooxda, wayna adag tahay in ciyaartoy 30 jir ah la siiyo waqti uu koox kula qabsado si la mid ah ciyaartoyda da’da yar.
Juventus ayaa halkan faa’iido weyn ku haysa, waxaanay heshay ciyaartoy 23 jir ah oo lagu tilmaamo inuu yahay ‘Xavi cusub’, isla markaana xirfaddiisu hadda soo baxayso, isaga oo da’yarna amaan ka helay ciyaartoyda waaweyn ee Barcelona.
23 sannadood ayuu jiraa, marka ay shanta sannadood ee qandaraaskiisu dhamaadaanna waxa uu noqon doonaa 28 jir, waxaanu wali ka yaraanayaa da’da uu waqtigan joogo Pjanic.
Juventus waxay Arthur Melo mushahar u siin doontaa sannadkii lacag dhan 5 milyan oo Euro, waxaanay shanta sannadood ee uu saxeexay isku-geyntoodu noqon doontaa 25 milyan oo Euro.
Barcelona ayaa dhinaceeda sannad kasta mushahar u siin doonta laacibka reer Bosnia ee Miralem Pjanic lacag dhan 6 milyan oo Euro, waxaanay afartiisa sannadood noqonayaan 24 milyan oo Euro.
Si kastaba, Juventus ayaa lagu tilmaamay inay ku faa’iiday heshiiskan oo ay gacanta ku dhigtay ciyaartoy 23 jir kubbad sameeye ah oo ay ku heshay 17 milyan oo kaliya iyo ciyaartoy cimrigiisa ciyaareed jooga oo ay siisay Barcelona.
Haddaba akhriste, ra’yigaaga ka dhiibo heshiiska ciyaartoy isweydaarsiga ee lacagtuna la socoto ee Barcelona iyo Juventus ay kula kala wareegeen Pjanic iyo Arthuro Melo, midkee ayayse kula tahay inay ku faa’iidday?